Rehefa vokatra mitovy no navoakan’ireo famerenana nanisa, nanao fianianana ny governemanta tao Trinidad & Tobago · Global Voices teny Malagasy
Rehefa vokatra mitovy no navoakan'ireo famerenana nanisa, nanao fianianana ny governemanta tao Trinidad & Tobago
Famerenana fanisana nanamafy fotsiny ihany izay hitantan'ny kaomity tany aloha
Voadika ny 30 Aogositra 2020 14:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, English
Keith Rowley, praiminisitra ao Trinidad & Tobago, miteny manoloana ireo mpanatrika ny fivoriana tao amin'ny Tranon'ny Filoha tao an-tSeranan'i Espaina (Port of Spain), rehefa avy nanao fianianana ny kabinetrany tamin'ny 19 aogositra 2020. Pikantsary nalaina tao amin'ny fampitàna mivantana nataon'ny CCN TV6 nandritra ilay lanonana nanaovana fianianana.
Andro sivy taorian'ny fifidianana solombavambahoaka natao tao Trinidad & Tobago tamin'ny 10 Aogositra, nanao fianianana ihany nony farany ny governemanta tao amin'io firenena io.
Taorian'ny namoahan'ny Kaomitim-pifidianana sy Sisintany (EBC) ny vokatra vonjimaika avy aminy nampiseho fa ny People's National Movement (PNM), antoko avy nitazona ny toerana teo aloha, dia nahazo seza 22 ao amin'ny antenimiera, raha 19 kosa ny an'ny mpanohitra, ny United National Congress’ (UNC), ity farany, milaza fa misy tsy fahatomombanana, dia nitaky ny famerenana fanisàna tany aminà fari-pifidianana maro.
Eritreritry ny mpitarika ny mpanohitra Kamla Persad-Bissessar ny hoe “mety efa tetipanorona [an'ny PNM] handresena amin'ny fomba tsy ara-dalàna mandritry ny fifidianana ilay tsy fisian'ny mpanaramaso iraisampirenena. Saingy tamin'ny farany, ny vokatra tamin'ilay famerenana ny fanisàna dia tsy nanao afa-tsy ny nanamafy fotsiny ihany ny zavatra efa hitan'ny EBC tany aloha.
Tsy nahomby ihany koa ny filazana nataon'ireo kandidà resy nilaza hoe nisy sonia mampiahiahy tamin'ireo taratasim-pifidianana, nanaporofo fa ny toerana hatry ny ela noraisin'ny fitondrana eo an-toerana nametraka ny fitiliana sy ny tsindrinentam-pahefana atao amin'ny dingam-pifidianana ao amin'ny firenena dia “mampanano-sarotra ny hamiliviliana ny fidianana ao Trinidad & Tobago.”
Mbola ifanosehana anefa ny seza iray azon'ny UNC. Nandritra ny antsafa hoan'ny gazety natao tamin'ny 18 Aogositra, napongatr'i Dr Keith Rowley, mpitarika ny PNM, fa nangatahan'ny antokony ny torohevitra araka ny lalàna avy amin'ireo zokiolona roa mpahay lalàna, izay nampahafantatra ny PNM fa “tsy mamaly ny zavatra takian'ny lalàna ary tena tsy manankery” ny fanendrena an'i Barry Padarath, kandidà an'i UNC, nahazo ny toerana tao amin'ny farip-pifidianana ao Princes Town.
Nametraka fanontaniana araka izany ny PNM momba ny maha-ara-drariny ny fanendrena an'i Padarath talohan'ny fifidianana. Nilaza i Rowley fa mety tsy hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsaràna ny antoko, satria ilay fifandirana dia sady “tsy maimaimpoana, tsy moravidy, no atahorana”, saingy nahatsapa fa tena zavadehibe ny mitondra ilay olana ho fantatry ny firenena iray manontolo.
Nomarihan'i Rowley fa nahatratra 23 tapitrisa dolara TT (eo amin'ny 3,4 tapitrisa dolara amerikàna) ny fitambaran'ny sara ara-pitsarana nozakain'ny PNM hamaliana ny fanapahankevitry ny UNC hanoherana ireo vokatry ny fifidianana tamin'ny 2015 teny anatrehan'ny fitsaràna, nandany teo amin'ny 14 tapitrisa dolara TT ny EBC (eo amin'ny 2 tapitrisa dolara amerikàna).
Ambaran'ny Dr. Rowley fa homeny dika mitovy amin'ilay filazàna avy amin'ny mpahay lalàna ny EBC mba hahafahany mamaritra ny toerana horaisiny momba ilay olana, ary hanoro hevitra ny filoha ihany koa.
Nandritra izany i Padarath dia nilaza hoe ny Praiminisitra Rowley tsy tokony hitondra io raharaha io eny amin'ny fitsaràna, na “hangina”, izay notoherin'i Justin Phelps, mpisolovava :
Betsaka no tokony ho andrasantsika avy amin'ireo mpitondra antsika fa tsy adihevitra milaza hoe ‘Anananay ny zo araka ny lalàna hanao an'io’. Tokony takiantsika amin'izy ireo ny tamberina vokatry ny firotsahany tamin'ny fanatanterahana izany, ny tombontsoa mety ho nentin'izany, ny antony mahatonga azy ireo maniry ny hanao izany.
Arakaraky ny nihalavàn'ny famerenana nanisa, nanomboka notakian’ ireo feo avy amin'ny UNC ny tokony hihemoran'i Persad-Bissessar, izay notanterahany ihany nony farany tamin'ny 18 Aogositra. Tao anatin'ny kabarim-pisintahana nataony, nambarany fa tsy ho avelany ho hita aminy intsony ny sary manao azy ho “toy ny vato misakana […] fialantsiny tsy hirosoan'ny governemanta handroso any aloha.”
Noteneniny ihany koa ny filàna “ny fanajàna ny safidy politikan'ny tsirairay na tsy notononiny sy notaritiny aza ny resaka foko hampizarazara ny vahoaka”. Ireo antoko politika roa lehibe dia samy nanao fihantsiana / fanivaivàna foko daholo nandritry ny taona maro, fa ny UNC no tena voakiana mafy indrindra noho ireo fomba fiteniny nandritra ny fampielezankevitra tamin'ny fotoana nanakaiky ny fifidianana, izay marobe no nitsara azy ho manafintohina ho an'ireo Mainty Hoditra.
Raha namaly ireo antso nataon'ny antoko misy azy ny mba handaozany ny toerana maha-mpitarika politika azy, nilaza i Persad-Bissessar fa: “Tsy safidy sahaza an'izao fotoana izao ny fandosirana,” izay filazana manampina ihany koa ny daomy ho an'ireo honohono rehetra nilaza fa hanery azy ny faharesena tamin'ny fifidianana. Ny UNC anefa dia miomana ny hanao fifidianana anatiny amin'ny 2021, mba hamaritany izay ho mpitantana ny antoko amin'ny hoavy.
Nanomboka tamin'ny 4:00 tolakandro ny fianianana nataon'ny praiminisitra Rowley sy ny kabinetra vaovaony, ny 19 Aogositra, ora ao Trinidad & Tobago (UTC-4), tao amin'ny Tranon'ny Filoha tao Port of Spain, renivohitra
Hatrizay ny mpanohitra dia amin'ny fivoriana voalohany ataon'ny antenimiera mpanao lalàna no manao ny fianianany. Alohan'io daty io , raha tsy misy mitsipaka araka ny lalàna ny fanendrena an'i Padarath, dia afaka hanao fianianany sy handray ny toerany izy, rehefa lany tao Princes Town tamin'ny elanelan'isa 6.572.